Ngobunye ubusuku kwii-Award Inspired Awards - ii-Geofumadas
Ubusuku kwiiMali eziPhefumulelwe
NgoNovemba, 2012 ezintsha, Microstation-Bentley
I-Blogsy sisixhobo esimangalisayo, ukuza kuthi ga ngoku kubhetele kakhulu ukubhala usuka kwi-iPad. Njengomboniso, ndinomdla wokuhlaziya eli nqaku ngalo mzuzu nje amabhaso ayahanjiswa. Ndingathanda ukulandela iindwendwe ezihlala noWoopra, kodwa iscript sayo sinzima kangangokuba uye waphosa isiza amatyeli aliqela, endinyanzele ukuba ndizame iZopim. Nangona iyisiqingatha semini eMelika, busuku ngaphakathi kwindawo ebiyelweyo bufudumele, kunye no-andelabra othi emva kwethutyana abe nendawo yokutshaya kwindawo yothando eqondwa zizibane ezijikelezayo ezijikelezayo kakuhle. Emva kwewayini emhlophe ebandayo sinikwe isuphu engaqhelekanga eluhlaza ekufuneka ibe yeinguqulelo zeViking yesobho sembotyi neqanda elibilisiweyo ngaphakathi ... kwaye xa ubeka imargarine ... Inencasa!
Wonke umntu usetafileni yakho, ukhwaza kwiprojekthi yakho. KwiBrazil, ngamaBrazilians kuphela kwikona, nangona bekumnandi ukubona uninzi lwabahlobo baseSpanic beza kwaye abadibene kwitafile enye, amantombazana amathathu ahamba nephephabhuku iMexico malunga nesihloko seoyile / amandla, intombazana evela kumagazini IsiSpanish somxholo wedolophu, inkwenkwana evela kupapasho lwase-Italiya indawo yeziseko zophuhliso kunye neBrazil nayo ingummandla wezakhiwo. Ke bahlala ngaphezulu okanye ngaphantsi bahlala umndilili weSpanish.
Ndikhethe ukuhlala nabahlobo baka-Azersu, nditsho igama lenkampani ngoba ilizwe alibambanga nto kum. Uxolo, ezo bezingabikho kwiminyaka yam yesikolo ... I-USSR ibonelele ngayo yonke into. Ndithethile nam ngasekupheleni kwenqaku, yiAzerbaijan. Kwaye ndiyafunga ukuba ndifikile kule tafile kuba ndifuna ukonwabela i-Be Inspired's raison d'être, ndifuna ukubamba yonke le meko ukuba uyahlupha, kwaye ndicinga ukuba kule tafile badlala kakhulu kangangokuba bona bobabini abathetha isiNgesi abasihoyanga kuphoswa umzuzu ... okanye nam.
Lilonke kukho iiprojekthi ze-57 ezivela kumazwe e-29 kwizigaba ze-20, abokugqibela kumabhaso awabanjwa okwesithathu eHolland kwaye ngokokuqikelela kwam kunokwenzeka ukuba ube e-Asia kulo nyaka uzayo. Ayisiyonto ingaphantsi, lilizwe lesithathu ukucetyisa iiprojekthi zokugqibela ngalo mcimbi, kuya kuqondwa ukuba eYurophu sele iziganeko ezithathu zanele kwaye zibuyele e-United States ... andiyikholelwa ke le yotyalo mali ka-Obama.
UGreg udlule etafileni ngokubingelela kwaye unqwenelela ithamsanqa abathathi-nxaxheba. Ukushukuma okuhle, kushushu kakhulu. Baye ke bagqithisa isitya esinesiqwenga sezinto ezinombala kwinto enencasa ... ibuyisela iinkumbulo zomhlaba okude, ndinobuso ebusweni kunye nesebe lesibhakabhaka elinokubakho kumhlaba wam kuphela.
Ngequbuliso kuza loo mvakalelo yokuba lapha ukuze uzinikezele, utye ikhefu, ilungelo. Ngelixa ukusikwa kwendawo ye-UTM ngokungathandabuzekiyo ugwayimbo lusele ngaphandle kwezothutho embindini weMadrid, into ezahluke kancinane kwizithethe zakudala zopolitiko kwelinye icala lesiporho, abanalo nofifi lokuba iyintoni na intsingiselo yedemokhrasi. Kodwa ke, ukuba ulapha emva kweminyaka eliqela kuthetha ukusimamela isizathu somntu: Yiphefumlelwe ngamandla ayo kwaye uthathe njengeyakho nangona wawukhe wawenza ngomsebenzi kwaye ekuhambeni udlulile uhlawulelwe wona. Ukuphefumlelwa kuya kuba yinto esiyiyo, abantu abaqhelekileyo, ukulibale izihloko ezihlanganisiweyo nolwazi, ukubiza ikratshi ngokuzithemba.
Ngoku isitya esinee-nyama ezingaqhelekanga, enye yazo ngokuqinisekileyo yimvana, enye inokuba idayinaso kwaye ndiza kuyitya kuba imnandi ... kwaye umculo wasemva uqalisa ukudlala, ngokungathi ndifuna ukuqala ingoma ye- "900 infraestructures". Kodwa okwangoku, yiculo kuphela elinemiboniso yeeprojekthi, ngelixa izibane ezinemibala ziqala ukuphuma kwaye ngamanye amaxesha zidlula kwiitafile zisinika iitoni eziluhlaza kunye nezimfusa.
Ngoku ... Ngena uGreg uxelele i-joke eMelika ... enkosi ubukho bomntu ngamnye ngesibonakaliso esifutshane sokuba kutheni iphambili kwiPortugal kulwakhiwo lwezixhobo ... ngesandla iglasi ye wayini emhlophe, ilungele ukubiza i-toast.
Ke bathi uChris Barron, kwaye le nxalenye yomdlalo sele indixelele… Haha. Ingoma endala ethi qho ngonyaka inike umxholo ohlekisayo kulo msitho, kunye nesithukuthezi sobuxhakaxhaka bobuchwephesha kunye neetekhnoloji ezingafundanga kakhulu ziphulukene nokunambitheka. Ndicinga ukuba lo nyaka unehlaziyo elilungileyo, kunye noopopayi bangasemva nangakumbi abanobuchule.
Emva koko uGreg ubuyile, kwaye unike imvumo kuzinzo loluntu lwethu kunye nokusingqongileyo. Ezi zinikezelwa kwiprojekthi yase-Australia kwaye enye ziye eDenver ... i-backstory inomdla ngokweemvakalelo kwaye isikhumbuza ukuba uphawu oluqinisekileyo esifanele silushiye.
Le mbasa mbasa iphindile ukuba 2004, 2005, leyo ziyakhunjuzwa kwakhona ukuba yintoni na ukuba loo nto isesandleni, egameni kwilizwe apho naningazalelwanga khona kodwa sifunda ukuthanda kakhulu, phantse kangangoko siziva xa ukuwina tie eMexico, onamava kakuhle, kunye Azteca.
Ke amabhaso okuqhubeka kozinzo, ootitshalakazi bonyaka kwaye abuyele kubuchule bokuziswa: Bayaya eChina, e-Austria nase-United States ngokwahlukeneyo. Ibhaso lolawulo oluphambili lolwazi lokuhambahamba kuhlala eVirginia, kulawulwa ukuqhuba ukuya eHolland kunye nophuhliso lonyaka ukuya eJapan ngomsebenzi omangalisayo wokuqokelela izinto zesitepsi seTetris ngenyathelo ... eyoyikisayo!
Emva koko uluhlu lweeprojekthi, ndiya kukuhlaziya njengoko amabhaso ahamba ngendlela ebomvu, eya kuthi ngombono wam iphumelele, nangona ndisebenzise owona mfanekiso ubukekayo. Ndiyavuma ukuba emva kokubona imiboniso kunye nokukhusela iiprojekthi ndingathanda ukutshintsha ukubheja kwam ... kodwa ndiyishiya ukuze ndiqiniseke ezimbini zamathandabuzo:
Kungenzeka njani ukuba iziprofeto zam ziyazaliseka.
Ingakanani inqaku elifanelekileyo leprojekthi elichaphazela imifanekiso esebenza kakuhle kunye nommeli woluhlu apho bancintisana nabo.
Ndiza kuphawula abaphumeleleyo ngesibindi.
Eli nqanaba limisa abathathi-nxaxheba abakhwaza rhoqo xa kukhankanywa. Nangona siphumelele okanye siphulukene nokuphindaphinda, kuyinyani kwiqela ngalinye, ngakumbi abo balapha okokuqala, abaphupha be-7 abaye baphuke iintloko kwiprojekthi eqala ngokukhonkotha i-dgn, ukuyigcina kwisiseko se-PostGreSQL kwaye bayipapashe kwiMephuGuide OpenSource. Phakathi kwabo bagqabaza ngolwimi lwabo olungaqhelekanga olubonakala ngathi lukhutshiwe kwiziqendu ze-Obelix, abanye babonakala ngathi beza kweli lizwe okokuqala kwaye banokufunga ukuba kudityaniswe kwindawo yokutyela okanye kwi-40 Euro kwindawo yokutyela. isibomvu Ukuba akukho nokuba ibe nye i-2 + 20 Euro ngokulandelayo kwiMyuziyam eshwankathela indlela yokucinga yomntu.
Ukudibanisa kwamaqela omsebenzi
I-Fluor / iHRR Global Consultants Consultants - I-RTD FasTracks I-P3 Project - (iDenver, Colorado, eU.SA)
I-Hanson Iinkonzo zobugcisa Inc. - I-74 Corridor i-Mississippi River Crossing - (iDavenport, Iowa kunye neMoline, e-Illinois, eU.SA)
Inkampani yaseSaudi Electricity - Ukusungulwa kwe-EDMS yoBukumkani kwi-SEC - (Zonke iIgions, i-Saudi Arabia) ndibambelele kwisigqibo sokuqala!
Iqela lama-Arabhu abangenakulungeleka kumfanekiso, ngokumomotheka kwindlebe ukuya endlebeni, kunye nehlombe lwabancedisi, ukuthatha indawo.
Ulungelelwaniso loLawulo lweeAset (Ubomi bokuPhila)
I-Ameren Callaway Energy Centre - iB inkxaso yoLawulo lweNyukliya yokuPhuma (iFulton, eMissouri, eU.SA)
Crossrail Ltd - I-Asset Information Management System - (eLondon naseMzantsi East England, UK)
Inkampani esemaZantsi - uMphathi weDatha uLawulo lokuPhumeza i-ROI-(Birmingham, Alabama, USA) Umdlali ophumeleleyo 🙁
Inkwenkwe ivuka kwaye inika umfazi oqinileyo ... Nangona wonke umntu ebetha ngokukhawuleza.
Armando Rito Engenharia SA - Aprili 4 Bridge - (Catumbela, Angola)
Borton-Lawson - Lehigh / Pohopoco Bridge Bridge (eParryville, ePennsylvania, eU.SA)
I-Modjeski kunye neMasters, Inc. - Huey P. Ukwanda kweBhulorho ende - (iNew Orleans, Louisiana, USA) ophumeleleyo!
Cheles isibini olubonakala baye quartering yakukha grafayithi ipensile wokubala, phezulu, ninoyolo ukuba usebenzise Bentley Rebar kunye 3 apicaciones ngakumbi sublime.
Kwaye ngoko ubusuku buqhubeka nokuza kweemvakalelo, owangisindisa ngoku ngoku, ukuze angayinakutshintshisana.
Izinto ezintsha kwiMveliso
I-Arthur Golding kunye ne-Associates-I-Helsinki Central Library Competition - (iHelsinki, eFinland)
UJohn McAslan + Abalingani - uKhululo loKhuseleko lweKumkani we-Cross (ukuLondon, UK)
I-Architectural Morphosis - I-Greater Interactive Group Ikomkhulu leNkampani-(iShailand, eChina)
Izinto ezintsha kwiinkqubo zonxibelelwano
I-IMMCO, Inc. -Ulawulo lokuLawula uMgangatho - (iDenver, eColorado, e-USA) i-Winner!
I-Precision Valley Communications - Isebenzisa i-Bentley kwiindawo ezifudumezayo - (eBoston, eMassachusetts, eU.SA)
I-HNTB yasebenzayo-Inkxaso-qiniso yoKwakha iCandelo loMgangatho woBuchule (i-Alexandria, eVirginia, eUnited States)
Ukwakhiwa kweShawmut kunye noKwakha - isakhiwo sikaMasipala saseDudley Square (iBoston, eMassachusetts, eU.SA)
I-Taylor Woodrow / iBAM Nuttall JV - i-Victoria Station Ukuphucula iJet Group - (eLondon, UK)
Innovation kwisiCwangciso sokuKwakha
I-LAB studio studio - Guardian Towers - (Abu Dhabi, UAE)
Robin Partington Architects - iPark House - (eLondon, UK)
Stanley Beaman & Sears - I-Atlanta History Centre Design Competition - (e-Atlanta, eGeorgia, eU.SA)
Izinto ezintsha kwi-Geotechnical neGeoenvironmental Engineering
Ubungcali be-Astiv - Ukubuyiselwa kwe-Landfill Slag-Landfill (i-Zumárraga, eSpain)
ISebe lezoThutho lezoThutho laseMississippi -Ukuphunyezwa kwe-GIP eMississippi DOT- (eJackson, eMississippi, e-USA) ophumeleleyo!
Isixeko saseCopenhagen - Ukuboniswa kwelanga kweCopenhagen City - (iCopenhagen, Denmark)
I-Crossrail Ltd - i-Crossrail - (London kunye ne-Mpuma ye-England, e-UK) i-Win Win!
I-Council yeSixeko yeNapier - i-GIS kunye ne-Asset Management - (eNapier, eNew Zealand)
Izinto ezintsha kwi-Geo-Engineering kunye noPhuhliso lwamaThili
BBKS-Projekt sp Z oo -. Rzeszów-Jasionka Taxiways e Airport - (Rzeszów, Poland)
I-Mortenson Construction - iProven Valley Valley Project Project ((Ely, Nevada, eU.SA) UMNINZI!
I-Tandon Urban Solutions Pvt. Ltd. - Nadaprabhu eKempegowda iProjekthi yeSixeko saseGreen - (e-Bangalore, e-India)
InnoIkhefu kwiMining and Metals
Iprojekthi yokuphucula i-AMEC - Cloudbreak (i-Pilbara Region, e-Australia)
I-Kumba Iron Ore Limited - i-Kolomela Systems Management Systems - (Postmasburg, eMzantsi Afrika)
I-Petra Diamonds Limited - I-Finsch ye-GIS - (i-Lime Acres, eMzantsi Afrika) UMNINZI!
Izinto ezintsha kwiNjineli yoLwandle
CNGS Ubunjineli - I-platform ye-Offshore engamelana ne-Ice LSP-1 - (uLwandle lweCaspian, iRussia Federation)
Nippon Steel & Sumikin Engineering Co., Ltd. - Tokyo Airport International Re-ukwanda Project - (Tokyo, Japan) owinayo
URobert Elks & Associates - I-Rock Bolting Rig - (Onslow, Australia)
Ukutsha kwindlela yokuvelisa amandla
Imithombo yamanzi e-China I-Beifang Uphando, uyilo kunye noPhando Co. Ltd. - I-Gelantan Hydropower Station - (iPuer, China)
IHydroChina Zhongnan Ubunjineli beZiko loBunjineli-Uyilo oluMiselweyo kunye nokuSetyenziswa kwesitishi samandla oGcino oGcweleyo ((Zunyi, China) uMphumeleli!
Inkampani yaseMzantsi - Ukuhlanganiswa kwezicelo zoCwangciso - (iKemper County, Mississippi, eU.SA)
Izinto ezintsha kwiindlela zokuThengisa
I-Giprotyumenneftegaz - Isitishi seCompressor Station kwiYurharovskoye Oilfield - (Nadym, eRussia Federation)
PT. Inti Karya Persada Tehnik - Iprojekthi yoPhuhliso lweComplex Complex - (Jabung, Jambi, Indonesia)
I-Zeton Inc. -Imodyuli yeNdawo yeModeli ye-GTL yoRhwebo yeArhente ((i-Aracaju, eBrazil) I-Winner! Ngobusuku boKrisimesi ngabahlobo bethu baseBrazil.
Izinto ezintsha kwiThutho kunye nezothutho
Quigg Engineering Inc. - I-Rail Speed ​​Speed ​​- (iChicago, i-Illinois kunye neSt. Louis, eMissouri, eU.SA)
I-Sweco AB-Hallandsås Project "Live BIM" Iprojekthi Yothutho - (Förslöv / Båstad, eSweden) UMNQUBA!
Igunya le-Transit Transit - I-Solutions entsha yokuPhathwa kweeMpahla zoTshintsho (iSt Lake Lake, Utah, eU.SA)
Ubunjineli boMatshini beCreighton -Indlela eyiFuller kunye neWashington Avenue - (iAlbany, iNew York, eUnited States) UMNINZI!
I-Infoth infrastructure kunye ne-Environment, LLC-NW 62nd Ukuphucula iAvenue - (Johnston, Iowa, eU.SA)
I-Sotepa Ltda - i-Humberto de Campos Street Extension - (Blumenau, Brazil)
Izinto ezintsha kwiNjineli yobunjineli
Isaphulelo - iSouth Morang Rail Extension - (eMelbourne, eOstreliya)
I-Fitzpatrick Engineering Group, i-PLLC - iZiko lokuLungisa - (Concord, North Carolina, eU.SA)
UJohn A. Martin & Associates, Inc. - Ukwandiswa kweeNkcazo zamazwe ngamazwe e-LAX - (eLos Angeles, eCalifornia, eU.SA), uMninimzi
Innovation ekuhanjisweni kweeNkonzo kunye neNethiwekhi zoLwazi
I-Enogex LLC-Ukuphunyezwa kwe-AutoPLANT kunye neProjekthiWise- (e-Oklahoma eseNtshona, e-USA) Ophumeleleyo!
I-Henan Electric Power Survey kunye neZiko loKwakha - uHenan 500-kilovolt PowerGrid 3D I-Platform ye-Operated Digitized and Integrated Operation Platform ((iZhengzhou, e-China)
I-Zhejiang Electric Power Design Institute - Jinhua Converter Station - (Jinhua, China)
Ukuveliswa kwamanzi kwiMveliso yamanzi kunye neNkunkuma yamanzi
I-Carollo Engineers, Inc. - IProjekti yeZiko loPhuculo lwaseSouth - (Denver, Colorado, eU.SA)
GE Water - Lanxess India - Ukutshatyalaliswa kweZero zotywala kweNkunkuma yokuLawula amanzi - (Nagda, India)
Amanzi aseMelbourne - iCommunity Treatment Plant ukuPhuculo oluPhezulu - (eMelbourne, eOstreliya)
Ukutsha kwamanzi, amanzi angcolileyo, amanzi emvula kunye noonxibelelwano
I-Azersu OJSC - Ulawulo lweeaseti ze-GIS olusekwe kwi-GIS e-Azersu - (Baku, Azerbaijan) WINNER !!!
Gannett Fleming, Inc. - Iinkqubo zokuHlanganiswa koLwazi lweNkqubo yoNyaka (iLehigh County, ePennsylvania, eUnited States)
NJS IiNjineli zaseIndiya Pvt Ltd - Iprojekthi ye-Agra Water Supply ye-JICA-incedisa i-Agra, i-India)
Abafana etafileni yam bahlala bethandabuza, bejongela phantsi nangamanqatha eenyawo zabo, xa kuthiweyo abaphumeleleyo baphakame, bakhwaze babinge. Kwaye baqala ukuzibuza ukuba ngubani oza ngaphambili ayokuthatha ibhaso ... Bakhangela iikhamera kwaye bavalelisane kwakhona, befihla inkungu emelana nomqala kwaye inyibilikisa amehlo ngomnqweno wokufuna.
Ahhh, le iyaKhuthazeka! Baye ke badlulise abanye ngaphambili kwaye enye ebonakala ngathi inokunxibelelana kakhulu ibeka umnxeba kulwimi lwayo ukuze ilumkise indlu yakhe, ngoncumo lomjita kunye nesiqingatha seenyembezi ezigxunyekwe yityesi yasekhohlo, efikelela kwisibatha sempumlo, iyamisa kwaye iphinde ikhulule kwakhona kwinkampani ye-mucus enesiqingatha ...
Uphefumlelwe! Yiba ngumntu!
Oko kwenzekayo kwitheyibhile nganye apho kukho umqhubi.
Ekugqibeleni isiganeko sivale kwaye ndikhawuleza ukugqiba eli nqaku kuba nangona usebenziso luye lunomdla, kufuneka ndiye kubhiyozela kuba ngomso ... kufuneka ndivelele eMadrid.
Kwaye ke, zam izigqibo:
Ngokumalunga nokukhethwa kwemifanekiso emele iprojekthi: Akukho nto ibonayo, umfanekiso ulungile kodwa ukhuseleko luyinto yonke. Ijaji yenze umsebenzi oncomekayo.
Ngokubhekisele kwisakhono sam sokuqikelela: I-8 yayilungile, i-12 yayingekho. Yintoni iGunya le40% elicebisa kum. Ke xa undifundela ubhala amacandelo obuchwephesha, ndikholelwe i-100%, kwaye xa ndixela kwangaphambili ... ndikholelwe ngaphantsi kwesiqingatha. 🙂
Ngendlela, ukuba ufunda eli nqaku kuba ucinga ukukhuphisana okanye ukhuphiswano kumabhaso afanayo ... Nditsalele umnxeba kwiingcebiso ezimbalwa. 🙂
Post edlulileyo«Edlulileyo I-5 Izinto ezibalulekileyo malunga ne-Inspired 2012
Post Next Ukuqonda ingqiqo BIM, kwimeko Bentley SystemsOkulandelayo "